ကျနော်နှင့် ဆံပင်ရှည်မလေး နွယ်နီ ဖြစ်ရပ်မှန် (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
ကျနော် ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကပေါ့ဗျာ…. ကျနော့်မေဂျာက သင်္ချာ သူမက ရူပက. သူမရဲ့ နာမည်က နွယ်နီ. မှတ်မှတ်ရရ သူမကို မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ စတွေ့တာ. ပုံမှန်ဆို တွေ့မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ တင်ပါးကျော်ထိ ဖြောင့်စင်း ရှည်လျားလှတဲ့ သူမဆံပင်တွေကြောင့် ကျနော်စပြီး သတိထားမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. မဲနက်ပြောင်တင်းလွန်းသည့် သူ့မရဲ့ ဆံနွယ်တွေရဲ့ စွဲဆောင်မှုကို ကျနော်လွန်ဆန်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ သူမ သွားရာနောက်လိုက်ခဲ့မိလေသည်. ဟောခန်းထဲရောက်တော့ သူမ ထိုင်တဲ့နောက်တည့်တည့်ကိုပဲ ကျနော်နေရာယူလိုက်ပြီး လှပလွန်းတဲ့ဆံနွယ်တွေကို တစိမ့်စိမ့်သာ ထိုင်ကြည့်နေမိတော့သည်. အဲ့ဒီနေ့တနေကုန် အတန်းမတတ်နိုင်ပဲ နွယ်နီ့ရဲ့အဆောင်၊ အခန်း၊ စီးသည့်လိုင်းကားအစ နေသည့်အိမ်အဆုံး ထောက်လှမ်းရေး တယောက်လိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့ရတော့သည်. နောက်တနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင့် နွယ်နီနေတဲ့ လမ်းထဲကို သွားမည်ဆုံးဖြတ်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်. ကျ​နော်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာပေ သူမ ထွက်လာလေသည်. ဒီနေ့တော့ သူမဆံပင်တွေကိုထုံးထားသည်. ကျ​နော့်ကို​တော့ သတိထားမိဟန်မတူချေ. သူမ သွားရာနောက်ကျနော် ဆက်လိုက်သွားမိသည်. တလမ်းကျော်ထိလျှောက်သွားပြီး အလှပြင်ဆိုင်ထဲဝင်သွားလေသည်. ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်း အလှပြင်ဆိုင်ဘေးနားက သစ်ပင်ရိပ်မှာ ကွယ်လိုက်ကာ ဆိုင်ထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်. ဆိုင်ထဲတွင်မှန်များထောင်ထား၍ အ​တော်အတန် လှမ်းမြင်နေရသည်. နွယ်နီ့ကြည့်ရတာ ဆိုင်မှဝန်ထမ်များနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုနေပြီး ဤဆိုင်ကိုအမြဲလာနေ​ကျထင်သည်. ကျနော်လည်း အခြေအနေဆက်ကြည့်နေပြီး စကားပြောသည်များကိုနားစွင့်ကြည့်လိုက်သည်. သူမ ရဲ့ထုံးထားတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို ဖြည်ချလိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရပြီး ကျနော်ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားလေသည်. ဒီလောက်လှသည့်ဆံပင်ရှည်မျိုးတော်ရုံ မတွေ့နိုင်ပေ.
” နွယ်နီ ဆံပင်တွေတောင် အတော်ရှည်လာပြီပဲ. ငါ့ညီမလေးဆံပင်ကတော်တော်ကောင်းတာပဲကွယ်. ဆံပင်ရှည်တာကောင်းပေမဲ့ သတိတော့ထားနော် အခုခေတ်က ဆံပင်လည်း မချန်ဘူး. အကုန်ဓားပြတိုက်နေတာ”
ဟု ဆိုင်မှ အစ်မကြီးကပြောလိုက်၍ သူမနာမည်က နွယ်နီ မှန်းကျနော်သိလိုက်ရသည်.
” ဟုတ်တယ် မမရေ. အဖေတို့အမေတို့လည်း ပြောနေကြတယ်. ခပ်တိုတိုသာညှပ်ပါလားဘာညာနဲ့”
ဟု ဆိုပြီး ဆံပင်ညှပ်သည့်ခုံတွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီး
” မမ ရေ ဒီတခါတော့ တကယ် ညှပ်ပစ်လိုက်တော့မယ် တိုလေကောင်းလေပဲ” ဟုပြောလိုက်သဖြင့် ကျနော်မျက်လုံးများပင်ပြူးသွားတော့သည်.
” ဟယ် နွယ်နီ …. တကယ်ကြီးလား ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ဆံပင်ကြီးကိုမညှပ်စေချင်ဘူးနော်”ဟု ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနှင့် ပြောလေသည်.
ထိုအခါ နွယ်နီမှ ရယ်မောကာ
” ဟီးဟီး… စတာပါမမရဲ့ ညှပ်စရာလားလို့ လှလွန်းလို့ ဒုက္ခခံပြီးထားလာတာ.. အခုက ရှေ့ဆံပင်ညှပ်မယ်ပြောတာ. ဆံမြိတ်လေး ပြန်ထားချင်လို့ ဟီးဟီး…” ဟုဆိုလေသည်. အဲ့တော့မှ
“အမလေးဟယ် တော်သေးတာပေါ့ ငါ့မှာ လန့်သွားတာပဲ. ညည်းက အတိုလေး ညှပ်ခိုင်းရင်​တောင် ကျုပ်က မညှပ်ပေးပါဘူးအေ ဟွန့်….”
“အင်းပါ မမရဲ့. သမီးကလည်းမညှပ်ဘူး အရှည်ကြီးဆက်ထားမှာ ခြေသလုံး ခြေမျက်စိထိ ထားမှာ ဟိဟိ”
” အဲ့လောက်အရှည်ကြီးက လှ​တေ့ာ လှပါရဲ့ ဒါမဲ့ သည်းယောက်ျားယူရင် ခက်မယ်​နော် ကလေးမ”
” ဟမ် ဘာလို့လဲ မမရဲ့. သမီးဘာ့သာ ဆံပင်ရှည်တာလေ ဘာခက်စရာရှိလို့လဲ”
“ရှိတာပေါ့ ငါ့ညီမရဲ့ ညည်းမသိတာတွေအများကြီးပဲ. ယောက်ျားတွေကလေ အဲ့လိုဆံပင်ရှည်ရှည်မိန်းကလေးတွေ ပိုကြိုက်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းရှိတယ်ဟဲ့”
“ဟုတ်လား လုပ်ပါအုံး ဘာလို့များလဲ သမီးသိချင်လို့ ဟီး”
“အယ် ဒီကလေးမနဲ့တော့ ခက်ချေပြီ. ဒီလိုဟေ့…. တည့်တည့်ပဲပြောတော့မယ်. ယောက်ျားတွေက အဲ့ဆံပင်ရှည်ကြီး ကိုင်ဆွဲပြီးလုပ်ချင်ကြတာဟေ့ နားလည်ပြီလား”
“ဟုတ်ပတော် ငါ့ယောက်ျားတောင် ငါ့ကိုဆံပင်အရှည်မထားလို့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ပွစိပွစိလုပ်နေတာ. ငါကလည်း ခံရမှာစိုးလို့ ကျောလယ်လောက်ထိပဲ ထားပြီး ညှပ်ပစ်တာ”
“အမလေး ဒီယောက်ျားတွေကလည်း ကြောက်စရာပါလား. သမီးကိုအဲ့လိုလာလုပ်လို့ကတော့ ကွိုင်အကြီးကြီးတတ်သွားမယ်၊ ဘာမှတ်နေလဲ. သမီးကတော့ သမီးဆံပင်အထိမခံနိုင်ဘူး. အဲ့လိုယောက်ျားမျိုး ဝေးဝေးရှောင်ရမယ်” ဟု နှုတ်ခမ်းလေး ထော်ကာ မျက်နှာလေးရဲပြီး ပြောနေတဲ့ နွယ်နီ့ကိုကြည့်ပြီး ကျနော်ပိုမို သဘောကျသွားလေသည်. ထို့နောက်
“နွယ်နီရာ တနေ့ကျရင် နင်ရဲ့ အဲ့ဆံပင်ရှည်ကြီး ငါကိုင်ဆွဲ လိုးမှာဟ” ဟု စိတ်ထဲ က ကြုံးဝါးနေရင်း သူမကို ကြည့်နေမိသည်…….
ကျတော်လည်း နွယ်နီ့ကိုရအောင်လိုက် မည်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူမ နောက် ထပ်ကျပ်မကွာလိုက်ရင်း ပိုးပန်းတော့သည်. အစကတော့ ကျနော့်ကို လုံးဝအဖတ်မလုပ်ပေ. ကျနော်လည်းကြိုးစားရင်း ၂လ ကျော်လောက်မှာ အဖြေစရတော့သည်. ကျနော့်ဘဝရဲ့ အပျော်ရွှင်ရဆုံး အချိန်ပေါ့. ဒီလိုနဲ့ သူမရဲ့ဆံပင်တွေကို ထိတွေ့ခွင့်ရဖို့ စတင်ကြံဖန်တော့သည်. ဒါမဲ့ နွယ်နီက သူ့ဆံပင်တွေကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေက လှလွန်းလို့ ကိုင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာတောင် ပေးမကိုင်ဘူးဗျ. အဲ့တာကြောင့် ကျနော်လည်း အရဲစွန့်ပြီး အတင်းမကိုင်ရဲဘူး. တော်ကြာ စိတ်ဆိုးသွားရင် မလွယ်ဘူးလေ. တခါက ကျနော့်လိုပဲ ဆံပင်ကြိုက်တဲ့ကောင်က နွယ်နီဆံပင်ကို ကိုင်တဲ့ ဘဲတပွေဆို ပါးနားတွေရိုက်တာ ဟိုကအခုထိ နွယ်နီ့ကို စေ့စေ့မကြည့်ရဲတော့ဘူး. တဦးတည်းသော သမီးဆိုတော့လည်း ဒေါသထွက် စိတ်ကြီးတာမှ လွန်ရောပဲ. ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်း နဲနဲ အရဲစွန့်ကြည့်တာပေါ့
“ချစ် ဆံနွယ်လေးတွေအရမ်းလှတာပဲပေါ့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပျော့အိနေမှန်းသိရတယ်. ကိုင်ကြည့်ချင်လိုက်တာ ချစ်ရယ်”
“ဟွန်း… မကိုင်ရပါဘူး. ချစ်ဆံပင်ကို ဘယ်သူမှကိုင်တာမကြိုက်ဘူး. အဲ့လို လိုက်ကိုင်ရင် ဆံပင်တွေကြမ်းကုန်လိမ့်မယ်. အခုလို နူးညံ့ပျော့အိနေတာ ဘယ်သူမှ အထိမခံထားလို့ကိုရဲ့”
“အာ… ချစ်ကလဲ ခဏလေးပဲ ပေးကိုင်လေ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး. ဖြည်းဖြည်းပဲကိုင်မဲ့ဟာကို. ချစ်ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေကို အရမ်းသဘောကျလို့ပါနော်”
“ရှင်က ကျမကိုချစ်တာလား ကျမဆံပင်ကိုချစ်တာလား”
“ချစ်ကိုချစ်တာလေ. ချစ်ကိုချစ်မှတော့ ချစ်ဆံပင်လည်း ချစ်တာပေါ့လို့”
“ရပြီ သိလိုက်ပြီ. ကိုက ဒီဆံပင်ကြောင့်ချစ်ကိုချစ်တာ ဒီဆံပင်သာမရှည်ရင် ချစ်မှာမဟုတ်ဘူး”
ကျနော်လည်း ဖြေရှင်းရင်း လူက အတော်ပင် ထိန်းချုပ်ထားရင်း ဒေါသကထွက်လာသည်. ပျော့အိဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကိုလက်က ကိုင်ရင်းကျနော်တော့ကို ရန်တွေ့နေသော နွယ်နီ့ကို ကျနော်ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး
“ဟုတ်တယ်ဟေ့ ဒီလိုလှပလွန်းတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးရှိတဲ့ မင်းကိုချစ်တာကွာ. ကျေနပ်ပြီလား. ပေးစမ်း အဲ့ဆံပင်”
ဆိုပြီး နွယ်နီ့လက်ထဲက ဆံပင်ရှည်ကြီးကို ကျနော့်နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းနား ကပ်ပြီး အားရပါးရ နမ်းရှုံ့လိုက်တော့သည်. ပိုးသား​လေးလို ပျော့ပြောင်းယုံမကပဲ မွှေးကြိုင်လွန်းတဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ အနံ့ကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ ညီတော်မောင်က ငေါက်ကနဲ ထထောင်သွားပြီး နွယ်နီ့ရဲ့ပေါင်ကို သွားထောက်မိတော့သည်. ကံဆိုးချင်တော့ အောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်မလာမိပဲ ပုဆိုးပဲဝတ်လာတာကြောင့် နွယ်နီ့ရဲ့ ပေါင်ကိုထောက်မိကြောင့် သူမ လည်းသိသွားပြီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို တွန်းထုတ်ပြီး
“ဟယ်… ရှင်… ရှင်… မကိုင်နဲ့လို့ ပြောနေတဲ့ကြားက နမ်းပါနမ်းလိုက်သေးတယ်. ရှင်က ကျမ မကြိုက်ဘူးဆိုတာလုပ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ကဲဟာ”
ဆိုပြီး ကျနော်အား လက်ဖြင့်ရွယ်လိုက်လေသည်. ကျနော်လည်း ပါးထိုးခံပြီး
“ချစ်ရိုက်ချင်ရင် ရိုက်လိုက် ဒါမဲ့ ကိုနာသလိုချစ်လည်း ခံစားရမယ်နော်”
“ရှင်က ကျမကိုခြိမ်းခြောက်တယ်ပေါ့ ရိုက်တယ်ဟာ… ကဲဟာ”
” ဖြန်း….. ဖြန်း……”
သူမ လက်သံဘယ်လောက်ကျယ်သလဲတော့မသိ ဘေးနားက လူတွေကပါ ကွက်ကျိ ကွက်ကျိဖြစ်ကုန်တော့သည်. ထိုအခါမှ နွယ်နီလည်း သူမရဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို ဝဲကနဲ လှည့်ပြီး ကျနော်ရှေ့မှ ထွက်သွားတော့လေသည်. ဘယ်ဘက်ပါးတဖက် ကြိမ်းသွားကာ ကျနော်လည်း အဲ့နေရာမှာပဲ ထိုင်ချလိုက်ပြီး
“တွေ့ကြသေးတာပေါ့ နွယ်နီရာ နင့်ရဲ့ အဲ့ဆံပင်တွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမကိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဲ့ဆံနွယ်တွေကို ငါကောင်းကောင်း ဆွဲလိုးပြမယ်. ငါနာတာထက် နင်၂ဆ နာစေရမယ်”
ဆိုပြီး စိတ်ထဲက အံကြိတ်ကာ ရေရွတ်လိုက်သည်.
ဒီလိုနဲ့ နွယ်န်ီနဲ့ ကျနော် စကားလည်း မပြော လူချင်းလည်း မတွေ့တာ ၁လ လောက်ကြာသွားသည်. စာသင်ချိန်ပြီးလို့ အဆောင်ထဲက ထွက်လာသောအခါ ကျနော့်အဆောင်ရှေ့တွင် နွယ်နီ့ရပ်စောင့်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်. စိတ်ထဲကတော့ ပျော်သွားပေမဲ့ မျက်နှာထားကိုပြန်တင်းလိုက်ပြီး သူမ ရှိရာသို့ လျှောက်သွားလိုက်သည်. မျက်နှာထားသာ တင်းထားရတာ မမြင်ရတာကြာလို့လားမသိ အရင်ကထက် နွယ်နီ့ကြည့်ရတာပိုလှနေသည်. အပေါ်ကရင်ဖုံးအနီလေးဝတ်ထားပြီး အောက်က ချိတ်ထမိန် အမဲလေးနဲ့ ဖြစ်ပြီး နွယ်နီ့ရဲ့ မဲနက်ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးက အင်္ကျီအနီပေါ်တွင်ထင်းနေတော့သည်. နွယ်နီ့ရဲ့ အခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြောရလျှင် ခပ်ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ အရပ်လည်း အနည်းငယ်ရှည်သည်. ရင်သားလေးတွေက လုံးဝန်းနေပြီး တင်လုံးလေးတွေလည်း စွင့်ကားသေးသည်. သူမရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင် မြင်သူတကာငေးလောင်အောင်လှလွန်းသည်.
အနားရောက်တော့ နွယ်နီက ကျနော့်အား
” ကို…. ချစ်တောင်းပန်ပါတယ်နော်. အဲ့နေ့က အရမ်းဒေါသထွက်ပြီး ရိုက်မိတာပါ. ပြီးတော့လေ ချစ်က ချစ်ဆံပင်ကို ဘယ်သူမှ ပေးမကိုင်ချင်ဘူးလေ အဲ့တာကလည်း ချစ်ဆံပင်ကို မြတ်နိုးလွန်းလို့ပါ. ဒါမဲ့ ကိုကိုင်ချင်ရင်တော့ ကို့သဘောပါနော်. ချစ်တို့အဆင်ပြေပြေ ပြန်နေကြမယ်အောင်နော်”
ဆိုပြီး လာချော့လေသည်. ချော့၍ပျော့ချင်သော်လည်း ကျနော်ဆက်တင်းထားပြီး ဘာမှပြန်မပြောပဲ ဆက်လျှောက်သွားတော့ နွယ်နီက နောက်က လိုက်လာပြီး မျက်ရည်လေးဝဲကာ
“တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုရယ်. နောက်ထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး. ကို့သဘောပါနော်”
ဆိုပြီး ဆက်ပြောလေသည်. ထိုမှသာ ကျနော်လည်း
“ကောင်းပြီလေ ချစ်ဘာ့သာ ပြောတာနော် ပြီးမှ စိတ်မဆိုးနဲ့”
ဆိုပြီး မျက်ရည်စတွေသုတ်ပြီး ကျနော့ လက်မောင်းကိုဆွဲဖက်လိုက်ကာ ကန်တင်းထိုင်ရန် ထွက်လာတော့သည်.
အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို ကျနော် ကိုင်ဖြစ်သည်. နွယ်နီက ကျနော်ကိုင်ရင် မကြိုက်ပေမဲ့ သူ့စကားနဲ့သူမို့ ဘာမှသိပ်မပြော. ကျနော်လည်း သူမရဲ့ ပျော့အိဖြောင့်စင်းနေတဲ့ဆံပင်ကြီး ကိုကိုင်ရသည်မှာ အတော်ပင် နှစ်ခြိုက်နေမိတော့သည်…..
နွယ်နီ့ရဲ့ ဆံပင်တွေကို သဘောကျတဲ့ကောင်တွေက တနေ့တခြားပိုများ လာ၍ ကျနော်လည်း စိတ်မချနိုင်တော့ပေ. အဲ့တာကြောင့် နွယ်နီ့ကိုအပိုင်ချုပ်မယ်ဟု ကြံစဉ်လိုက်လေသည်. ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်း အခွင့်အရေးစောင့်နေရင်း စာမွဲဖြေပြီးနောက်ဆုံးရက်ရောက်လာတော့သည်. စာမွဲက ၁၂နာရီ ပြီးသောကြောင့်​ နွယ်နီနဲ့ အတူတနေရာရာသွားရန် စီစဉ်လိုက်သည်. သူမကိုတော့ ဘာမှမပြောပဲထားလိုက်သည်. အစီအစဉ်ရှိသောကြောင့် အိမ်က ကားယူလာခဲ့လိုက်တာ ပိုကောင်းသွားတယ်. ကျနော်လည်း ကားမောင်းထွက်လာလိုက်ပြီး နွယ်နီ့ရဲ့အဆောင်ရှေ့မှာ သွားစောင့်နေလိုက်သည်. ကျောင်းသူတွေအများကြီး ကြားထဲမှာမှ ကျနော်ရဲ့ ချစ်သူလေးက ပိုမိုပေါ်လွင်နေသည်. ရင်စေ့အင်္ကျီ ပန်းရောင်နှင့် ထမိန်ပန်းရောင် ဝမ်းဆက်လေးကိုဝတ်ထားပြီး ဆံပင်ရှည်ကြီးကို မြင်းမြီးပုံစံ ခင်မြင့်မြင့်လေး စည်းထားကာ ကျနော်ထံသို့ ကြွကြွရွရွလမ်းလျှောက်လာသည်. သူမရဲ့ အလှပတွေအပြင် မြင်းမြီးပုံစံစည်းနှောင်ထားတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကြောင့် ဆွဲလိုးချင်စိတ်တွေ တဖွဖွဖြစ်လာပြီး အောက်က ညီတော်မောင်ကပါ အငြိမ်မနေတော့ချေ.
“စာမွဲဖြေနိုင်လားချစ်. ကိုတော့အိမ်မပြန်ချင်သေးဘူး. တနေရာရာသွားရအောင်. ချစ်အချိန်ရတယ်မလား”
” အင်း…. ရတော့ရပါတယ်. ကိုကဘယ်ကိုသွားမို့လဲ”
“ချစ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောချင်လို့ပါ. အမြဲကျောင်းထဲမှာပဲတွေ့နေရတာ ကိုတို့အေးအေးဆေးဆေးမပြောရဘူးလေ. ပြီးတော့ ကို့ချစ်လေးက ဒီနေ့အရမ်းလှနေတော့ ကိုကချစ်ချင်လို့. လူတွေနဲ့ အနှောင့်အယှက်ကင်းမဲ့ နေရာပေါ့”
ဆိုပြီး ကျနော့်ကိုနှုတ်ခမ်းလေးစူကာ လက်မောင်းကို လှမ်းထုလေသည်. အာ့နဲ့ ကားမောင်းထွက်လာပြီး မ/ဒဂုံထဲမှာရှိတဲ့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုထဲ ဝင်လိုက်သည်.
“ကို…. ဒီနေရာကြီးလား. ချစ် မသွားချင်ဘူး. သူများတွေမြင်ရင် ရှက်စရာကြီး”
“ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူး ချစ်ရယ်. ချစ်က ရှက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးမှန်းသိလို့ ကားစီစဉ်ပြီးလာတာပေါ့. ပြီးတော့ အခန်းရှေ့ထိ ကားဝင်ရပ်လို့ရတယ်. ဘယ်သူမှ မတွေ့စေရဘူးနော်”
ဆိုပြီး ဆံမိတ်လေးချထားတဲ့ နွယ်နီ့နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး အနမ်းပေးလိုက်သည်.
အခန်းရှေ့ရောက်တော့ ကားပေါ်ကဆင်းဖို့ကို နွယ်နီတယောက် တွန့်ဆုတ်နေတော့သည်. ကျနော်လည်း စိတ်ကအတော်ပင်ထနေလေပြီ. တွန့်ဆုတ်နေတဲ့ နွယ်နီ့လက်ကိုဆွဲပြီး အခန်းထဲ အတင်းခေါ်သွားလိုက်သည်. နှစ်ယောက်အိပ် ဆိုဖာကုတင်ကြီးပေါ်မှာ နွယ်နီ့ကိုထိုင်စေလိုက်ပြီး အိမ်သာရှိရာသို့ အမြန်လာလိုက်ကာ နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို အားပါးတရ ဆွဲပြီးလိုးနေသည်ဟု မှန်းပြီး တကြောင်းပစ်ဆွဲ လိုက်တော့သည်. အဲ့တော့မှပဲ လူက နေသာထိုင်သာ နဲနဲရှိသွားတော့သည်. အိမ်သာထဲက ပြန်ထွက်လာသော ကျနော့်အားကြည့်ရင်း
“ကြာလိုက်တာ ကိုရယ်. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ. ဒီမှာ ချစ်ဖြင့်အိပ်ပျော်တော့မယ်”
ဆိုပြီး မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ရန်တွေ့လေသည်. ကျနော်လည်း
“အင်း နဲနဲကြာသွားတယ်. ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ ဟိုဟာဖြစ်လို့”
ကျနော်လည်း ၂ယောက်တည်းရှိတာ မထူးဘူးဆိုပြီး အရဲစွန့်ကာ
“ချစ်ဆံပင်ရဲ့ အလှက ကို့ရဲ့စိတ်ကိုအရမ်းနှိုးဆွတယ်ကွာ. အဲ့တာကိုမှန်းပြီး ထုပစ်လိုက်တာ”
ဆိုပြီး တအံ့တဩ ပြန်မေးလေသည်
“ဟုတ်တယ်ချစ်. ချစ်ဆံပင်တွေမြင်တာနဲ့ ကို့ရဲ့ကာမစိတ်တွေအလိုလိုနိုးလာရော. ပြီးတော့ ချစ်ရဲ့ ဆံပင်လေးတွေနဲ့ ကို့လီးကိုပတ်ပြီး ထုပေးပါလားကွာ”
“ရှင်တော်တော်မိုက်ရိုင်းပါလား. ကျမ အမြတ်တနိုးထားတဲ့ ဆံပင်ကို ရှင်က ဘာဖြစ်တယ် လုပ်ချင်တယ်ဟလား”
“ကျမရှေ့က ဖယ် အခုပြန်မယ်. ကျမကို ဘယ်လိုမိန်းမ အောက့်မေ့နေလဲ. ရှင်နဲ့လည်း ပြတ်ပြီ”
ဆိုပြီး ထိုင်နေရင်း ကျနော့်အား တွန်းဖယ်လေသည်.ကျနော်လည်း စိတ်က ထိန်းမရတော့ဘဲ နွယ်နီ့ရဲ့လက်တွေကိုချုပ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ဆွဲလှဲချလိုက်ကာ သူမရဲ့ အပေါ်ကနေ အုပ်မိုးလိုက်လေသည်. နွယ်နီလန့်သွားပြီး
” ရှင် ဒါဘာလုပ်တာလဲ ကျမအော်လိုက်ရမလား. အခုလွှတ်စမ်း”
” မင်းအော်ချင် အော်လိုက် ကိုလုပ်ချင်တာမလုပ်ရ သရွေ့ လွှတ်မပေးဘူးကွာ”
ဟုဆိုကာ ဆွဲလှဲထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ကုတင်ပေါ် ပြန့်ကျဲနေတဲ့ နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို မျက်နှာအပ်ပြီး နမ်းရှုံ့လိုက်လေသည်.
နွယ်နီကတော့ ကျနော့်အား မျက်နှာတင်းတင်းနဲ့ကြည့်ပြီး အော်ရန်ပြင်လိုက်သောအခါ သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးတွေကို ကျနော် အသားကုန်စွဲစုပ်ပြီး နမ်းရှုံ့ လိုက်တော့သည်. နမ်းနေရင်း အသားကုန် ရုန်းကန်သော်လည်း ကျနော်အပိုင်ချုပ်ထားသောကြောင့် ဘာမှမတတ်နိုင်ပေ. သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ကျနော့်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ချုပ်လိုက်ပြီး ကျန်တဖက်နှင့် နွယ်နီ့ရဲ့ တင်းရင်းနေတဲ့ နို့အုံကြီးကို အင်္ကျီ ပေါ်မှ ဖမ်းကိုင်ကာ ဆွဲညှစ်လိုက်သည်. နို့ကိုင်ခံရသဖြင့် နွယ်နီ တမျိုးဖြစ်သွားပြီး သိပ်မရုန်းတော့ပေ. ကျနော်လည်း နမ်းနေတာကိုမလွှတ်ပဲ အခြေအနေကိုလိုက်ကာ နွယ်နီ့အင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေက​ဖြုတ်လိုက်ပြီး ဗလာစီယာပေါ်မှ နေ၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ညှစ်ထည့်လိုက်ရာ နွယ်နီပါးစပ်မှ
အင်္ကျီကိုဆက် မချွတ်သေးပဲ လက်ကိုအောက်ဆင်းလိုက်ပြီး ထမိန်စကပ်ရဲ့ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်လိုက်တော့ နွယ်နီမျက်စိပြူးပြီး ကျနော်အားကြည့်နေတော့သည်. နမ်းနေရင်း လျှာလေးနဲ့ပါ နွယ်နီ့ ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီး အာရုံလွှဲလိုက်ကာ အောက်ကဇာတ်လမ်းကိုပြန်ဆက်လိုက်သည်. နွယ်နီ့ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ လက်လျိုလိုက်ကာ အမွှေးနုနုလေးတွေကို စမ်းမိလိုက်ပြီး အထဲ ထပ်ထည့်လိုက်သည်.
နွယ်နီအဖုတ်လေးက ဖောင်းမို့မို့လေးဖြစ်ပြီး အစိလေးကပျောက်နေတာကြောင့် အက်ကွဲကြောင်းထဲ လက်ညှိုးထည့်ကာ အစိလေးကို ပွတ်ချေလိုက်တော့ နွယ်နီ့ တကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားတော့သည်. အပေါ်အောက် ၄. ၅ ခါလောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တော့ အရည်ကြည်လေးများ အတော်ပင်စို့ထွက်လာတော့သည်. ထိုအချိန်မှာပဲ ကျနော့်ညီတော်မောင်ကလည်း နောက်တကြိမ် ထပ်မံထောင်လာတော့တာနဲ့ ဘောင်းဘီချွတ်ဖို့ပြင်ရတော့သည်. နွယ်နီ့အဖုတ်လေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆက်တိုက်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ရုန်းကန်မှုတွေလျော့သွားပြီး နှုတ်ခမ်းကလည်း ကျနော်အား တဖန်ပြန်ပြီး စုပ်နမ်းလာသည်. အာ့နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ လက်တွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ကျနော့်ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်ပြီး နွယ်နီ့အားဆွဲထူလိုက်သည်. ခုနက ရုန်းရင်းဆန်ခက်ဖြစ်ထားသောကြောင့် အနည်းငယ်ပွနေတဲ့ နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို ခေါင်းစည်းကြိုးဆွဲချွတ်လိုက်သည်. ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်တတ်ကာ နောက်နေသိုင်းဖက်လိုက်ပြီး လှပလွန်းတဲ့ နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို မျက်နှာအပ်ကာ နမ်းရှုံ့ရင်း လက်တွေကလည်း နွယ်နီ့ အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်ကာ ဗလာဆီယာကိုထပ်မံချွတ်ချလိုက်သည်. လုံးဝန်းပြည့်တင်းလှတဲ့ နို့လေးတွေကိုမထိတထိ ကိုင်လိုက်တော့ နွယ်နီ့ကိုယ်လုံးလေးတွန့်သွားတယ်. စောက်ရမ်းဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ ကောင်မလေးက အခုကျတော့ ကျနော်ပြုသမျှ နုနေတော့သည်. ဆံပင်လေးတွေ လည်ဂုတ်နားက ဖယ်ပြီး ရှေ့ကိုပို့လိုက်ကာ နွယ်နီ့ရဲ့ နို့သီခေါင်းလေးတွေနဲ့ အတူ ပွတ်ချေပေးလိုက်ရာ ပါးစပ်မှ
ဆိုပြီး ညီးသံတွေထွက်လာတော့သည်. ကျနော်လည်းမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်ရာ ညီတော်မောင် ဖြောင်းငနဲ ပေါ်လာတော့သည်. နွယ်နီ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲလှည့်လိုက်ကာ
” လီးစုပ်ပေးစမ်း ချစ်”
” ရွံစရာကြီး မစုပ်ပေးနိုင်ဘူး. ကျမကိုအဲ့လိုလာမခိုင်းနဲ့”
” မင်းကတော့ ဒီလောက်လုပ်ထားတာတောင် စွာနေသေးတယ် လာစမ်း”
ဆိုပြီး နောက်ကျောမှာ ပြန်ကျဲနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီး သိမ်းကျုံးပြီး ဆွဲကိုင်လိုက်ကာ နွယ်နီ့ ပါးစပ်ထဲကို ကျနော်လီးအား အတင်းထိုးထည့်လိုက်သည်. ကျနော်လီးက ၆လက်မလောက်ရှည်တာမို့ နွယ်နီ့ပါးစပ်တခုလုံး ပြည့်သွားပြီး အာခေါင်ထိအောင်ရောက်သွား၍ မဆန့်မပြဲနဲ့ နွယ်နီတယောက် မျက်ရည်များပင်ဝဲနေတော့သည်. ၁၀ချက် ၁၅ချက်ခန့် ထိုးလိုးပြီးသောအခါ နွယ်နီ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး
” ကိုပြောတာ လုပ်စမ်းပါကွာ. မင်းအထွန့်မတတ်နဲ့ ကြားလား. မင်းကို အသေလိုးပေးလိုက် လို့ရတယ် ဘာမှတ်နေလဲ. ငြင်းဆန်ရင် ပိုနာသွားမယ်နော်. အခု ကိုက အိပ်ယာပေါ်ပက်လက်လှန်နေမယ် မင်းက ကိုနဲ့ပြောင်းပြန်နေပြီး ကို့လီးကိုစုပ်ပေး ကြားလား. ကိုက မင်းကိုပြန်မှုတ်ပေးမယ်. နေအုံး မင်းဆံပင်တွေကို ရှေ့ချပြီး လီးကိုပတ်ပြီး စုပ်နော်”
ဟု ကျနော် ကြိမ်းမောင်းလိုက်ရာ နွယ်နီလည်း ဘာမှပြန်မပြောပဲ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးသည်. ကျနော့်ဘဝမှာ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘအခိုက်အတန့် ရောက်လာတော့သည်. ပျော့ပျောင်းလှတဲ့ ဆံနွယ်တွေနဲ့ လီးကို ရစ်ပတ်ခံရလိုက် အထိအတွေ့က ဘယ်လိုမှ ပြောမတတ်အောင်ပင် ကောင်းလွန်းသည်. ဒီကြားထဲ နွယ်နီရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါး ဖူးဖူးလေးတွေနဲ့ လီးကို စုပ်သပ်ပေးမှုကလည်း အတော်ပင် အရသာရှိလှသည်.
ကျနော့် မျက်နှာပေါ်တွင် ဖောင်းမို့ရဲတွတ်နေပြီး အမွေးရေးရေးလေးပေါက်နေတဲ့ နွယ်နီ့ အဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ လှမ်းကလိလိုက်တော့ အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ထွက်လာပြန်သည်. သူတပြန် ကိုယ်တပြန် မှုတ်ရင်း စုပ်ရင်းနဲ့ ကျနော် ပြီးသွားတော့သည်. ခံစားမှုက ကောင်းလွန်းသောကြောင့် ကျနော့်လီးက လရည်တွေပန်းထွက်လာပြီး နွယ်နီ့ မျက်နှာကို စင်ကုန်တော့သည်. ကျနော်လည်း အတော်ပင်မောဟိုက်သွား၍ ပက်လက်လန်လျက်ပင် အပန်းဖြေနေချိန်တွင် နွယ်နီကတော့ သူမရဲ့ဆံပင်တွေကို ခြုံလွမ်းထားကာ ကျနော့်အား ကျောပေးရင်း ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ကာ ရှိုက်ငိုနေတော့သည်. အနည်းငယ်အပန်းပြေသွား၍ ကျနော်ထလိုက်ပြီး နွယ်နီ့ကိုဖက်လိုက်ကာ
” ချစ်ရယ် ကိုက အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးအရမ်းလိုချင်နေလို့ပါနော်. စိတ်မဆိုးပါနဲ့ချစ်နော်. အခုမျက်နှာသွားသစ်လိုက်အုံးနော်”
ဆိုပြီး နွယ်နီ့ရဲ့ ငယ်ထိပ်တည့်တည့်ကို နမ်းလိုက်လေသည်. ကိုယ်တုံးတီးနဲ့ ဖင်လုံးကားကားကြီးတွေပေါ်မှာ ဘယ်ညာရိမ်းနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကိုကြည့်ပြီး ကျနော်စိတ်တွေ နောက်ထပ်တကြိမ် ပြန်ထချင်လာတော့သည်.
မျက်နှာ သစ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ နွယ်နီက ကျနော်ထံ မျက်နှာ တင်းတင်းနဲ့ ပြန်လျှောက်လာပြီး
” ရှင့်ကိစ္စ ပြီးပြီမလား. ကျမကိုပြန်ပို့ပေးတော့”
ဆိုပြီး လေသံမာမာနှင့် လာပြောတော့ ကျနော်လည်း အနည်းငယ် စိတ်တိုသွားပြီး
“မပြီးသေးဘူး ကျန်သေးတယ် မင်း ဆံပင်တွေကို ဖြီးပြီး ခေါင်းစီးလိုက်အုံး”
” ရှင်ဘာလုပ်အုံးမှာလဲ. ဒီဆံပင်တွေကို လုပ်လို့ မပြီးနိုင်တော့ဘူးလား”
” အေး မပြီးသေးဘူး. လုပ်စရာကျန်သေးတယ်”
ဟု ဆိုပြီး ခေါင်းစည်းကြိုး လှမ်းပေးလိုက်သည်. နွယ်နီဆံပင်တွေကို တစုတစည်းတည်း စည်းလိုက်ပြီး ကျနော့် ဘေး ကျောပေးကာ ထိုင်ချလိုက်သည်. ခေါင်းစည်းကြိုးနားကနေ ဆံပင်တွေကို မ လိုက်ပြီး ဖွေးဥနေတဲ့ ဂုတ်သားလေးကို အနမ်းပေးလိုက်တော့ နွယ်နီ့ကိုယ်လုံးအနည်းငယ်တွန့်သွားသည်. ကျနော့်လက်တွေကို ဂျိုင်းအောက်က လျိုလိုက်ကာ တဖက်က နွယ်နီ့ရဲ နို့သီးခေါင်းလေးကို စမ်းပြီး ညစ်ပေးကာ လက်တဖက်က ပေါင်ကြားထဲလျိုကာ အဖုတ်လေးကိုအုပ်မိုးပြီး စမ်ကြည့်လိုက်သည်. ဘယ်လောက်တောင် ထန်နေလဲ မသိ အရည်တွေ တော်တော်ရွဲနေလေသည်. ထို့နောက်
“မင်းကို လိုးတော့မယ်နော်. လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ကို ကော့ကုန်းထားပေးစမ်း”
ဆိုပြီး ဖင်လုံးကြီးတွေတုန်အောင် ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တော့
“အာ့ နာတယ် ဖြေးဖြေးလုပ်” ဆိုပြီး ဖင်ကုန်းပေးရှာသည်. နွယ်နီ့ကြည့်ရတာ မာနကကြီးချင်သော်လည်း အလိုးလည်းခံချင်နေပုံပေါ်သည်.
ဖင်လုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကြားထဲမှာ အဖုတ် ရဲရဲလေးပြူးထွက်နေသည်ကို မြင်ရပြီး ကျနော်လီးကလည်း ပါကင်ဖောက်ဖို့ အသားကုန် တာဆူနေတော့သည်. နွယ်နီ့နောက်နေ အလိုသင့်နေရာ ယူလိုက်ပြီး အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းနေရာကို ကျနော်လီးနဲ့ ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တော့ ဖင်လုံး ကြီးတွေတုန်တတ်ပြီး ပါးစပ်မှလည်း ညီးသံတချို့ထွက်လာတော့သည်. ပါကင်လေးဖြစ်သည့်အပြင် ဖင်ကုန်းထားသောကြောင့် ကျနော်လီး ထိုးထည့်ရသည်မှာ အလွန်ပင်ကျပ်နေတော့သည်. အဲ့တာနဲ့ နွယ်နီ့ကို
” ပေါင်နဲနဲကားပေး ပြီးတော့ မင်းဆံပင်တွေကို ကျော်ပေါ်တင်ပေး” ဆိုပြီး အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သူမ တုတ်ခိုင်မဲနက်နေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီး ကို ကျနော့်ထံ ဝကွက်အပ်လိုက်သည်. ကျနော်လည်း ဆံပင်ရှည်ကြီးကို လက်တွင် ရစ်ပတ်လိုက်စုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး လီးကို အဖုတ်တွင်တေ့ကာ အားနဲ့ ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်တော့သည်. ကျပ်လွန်း၍ ထိပ်ဖျားလေးသာ ဝင်သည်. ထိပ်ဖျားဝင်ယုံသာရှိသေးသည် နွယ်နီ အော်လေပြီ
” အား….. နာတယ် မလုပ်ပါနဲ့ ကျမ မခံနိုင်ဘူး ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတော့… အားးး…..”
ကျနော်လည်း စိတ်မလျော့နိုင်ပဲ ဆက်ဖိသွင်းရင်း ကျန်လက်တဖက်က နွယ်နီ့ရဲ့ နို့တွေကိုဆွဲညစ်လိုက်သည်.
” မရတော့ဘူး အမလေး သေပါပြီ. ပြန်ထုတ်ပေးပါတော့… ဟီး….ဟီးးးး”
ကျနော်လည်း အဖုတ်က ကျပ်ပြီး မဝင်တာက တမျိုးနှင့် နွယ်နီ့ကိုလိုးဖြစ်အောင် လိုးချင်သည်က တမျိုးနဲ့ ဒေါသတွေထွက်လာကာ စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီး ဒီလောက်ဖြစ်တာကွာ ဆိုပြီး ဆံပင်တွေကို ခေါင်းမော့သွားအောင် အသားကုန်ဆွဲလိုက်ပြီး အားထည့်ကာ တချက်တည်းဆောင့်ချလိုက်တဲ့အခါ အပျိုအဖုတ်လေးရဲ့ အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ထိုးခွဲပြီး လီးကတဆုံး ဝင်သွားတော့သည်. ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ အခါ ကျနော့်လီးမှာ သွေးတွေပါပါလာတော့သည်. နွယ်နီ့ ကိုမပြောတော့ပဲ အထုတ်အသွင်း မှန်မှန်လုပ်ရင် အဝင်အထွက် ချောလာတော့သည်. အဲ့တော့မှ သတိပြန်ဝင်လာပြီး နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို လက်က ဖြည်းဖြည်းလျော့ပေးတဲ့လိုက်အခါ ကျနော်လက်ထဲတွင် ဆံပင် ၁၀ ချောင်း ၁၅ ချောင်းလောက် ကျွတ်ပါလာတော့သည်. ဘယ်လောက် ကြမ်းသွားသလဲတော့မသိ နွယ်နီ့ထံမှ အသံပါပျောက်သွားသည်.
” ချစ် ရရဲ့လား အရမ်းနာသွားလား. ကိုနဲနဲ ကြမ်းသွားတယ်ကွာ. Sorryနော်”
လို့ပြောသော်လည်း နွယ်နီဘာမှ ပြန်မပြောပေ. ကျနော်လည်း လိုးနေတဲ့ အရှိန်တတ်​နေတော့ အချက်၄၀ ခန့်လိုးပြီး ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာ၍ အဖုတ်ထဲမှ လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပေနေတဲ့ သွေးတွေကို တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်လိုက်ကာ လေးဘက်ထောက်နေတဲ့ နွယ်နီ့ကို ပက်လက်ဆွဲလှန် လိုက်သည်. နွယ်နီက အံကိုအတော်ကြိတ်ထားရင် ကျနော့်ကို နဂါးမျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေ စီးကျနေတော့သည်. ကျနော်လည်း လုပ်ပြီးမှတော့မထူးတော့ဘူး နောက်မှ ချော့မယ်ဆိုပြီး ပေါင်လေးကို ဖြဲကာ ဆက်လိုးရင်း နွယ်နီ့ရဲ့ အဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ကာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပေါ် ပစ်လှဲ ချလိုက်တော့သည်. လှဲနေရင်း နွယ်နီက ကျနော့်အား
” ဒီနေ့ ရှင်စိတ်ကြိုက်လုပ် နောက်နေ့တွေ ကျမစိတ်ကြိုက် ကျမလုပ်မယ်. ဒီနေ့ ရှင့်နေ့ပဲ”
ဟု ကြိမ်းဝါးပြီး ပြောတော့ ကျနော် နဲနဲ အံ့ဩသွားတယ်.အာ့နဲ့
” ချစ်က နောက်နေ့တွေ ဘာလုပ်မလို့လဲ”
” ရှင်သိစရာလည်းမလိုဘူး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း မလိုဘူး. ရှင်လုပ်ချင်တာ ဒီနေ့လုပ်”
ဆိုပြီး လေသံမာမာနဲ့ ပြောလေသည်. ကျနော်လည်း ထလိုက်ပြီး
” အေး တွေ့ပြီပေါ့ဟာ. လာ ထစမ်း. ပေးစမ်း မင်းဆံပင်တွေ “
ဆိုပြီး နွယ်နီ့ဆံပင်တွေကို ဆွဲယူလိုက်ကာ ခေါင်းစည်းကြိုးဖြည်လိုက်ပြီး ကျနော့်လီးအား ဆံပင်တွေနဲ့ ပတ်လိုက်ပြီး နွယ်နီ့ရဲ့ ဦးခေါင်းအရင်းနားထိဆံပင်တွေထဲသို့ လီးထိုးလိုးတော့သည်. ၁၅မိနစ် ကျော်လောက်ကြာတော့မှ လူလည်း ဒူးတွေအတော်ချောင်ကျလာပြီး ပြီးခါနီးဖြစ်လာတော့သည်. နွယ်နီ့ရဲ့ နူးညံ့နေတဲ့ ဆံပင်အုံထဲကို ကျနော် လရည်တွေ ပန်းထုတ်ချလိုက်သည်….. အချိန်ကလည်း ညနေ၃နာရီ ကျော်လေပြီ. ဒီလိုနဲ့
” ရေချိုးခန်းထဲ သွားရအောင်ချစ်”
ဆိုပြီး နွယ်နီ့ကိုလက်ဆွဲကာ ခေါ်သွားလိုက်သည်. ရေပန်းဖွင့်ချလိုက်ပြီး နွယ်န်ီကိုဖက်ထားကာ သုတ်ရည်တွေ ပေနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို ရေနဲ့ ဆေးချပေးလိုက်သည်. တည်းခိုခန်းက ပေးထားတဲ့ ရှမ်ပူထုပ်လေး ကိုဖောက်ပြီး နွယ်နီ့ ဆံပင်တွေ စိတ်ပြေနပြေ ထိုင်လျှော်ပေးနေရင်း နွယ်နီ့ရဲ့ ဆူဖြိုးနေတဲ့ နို့တွေ​က ခန္ဓာကိုယ်က ကို လာလာ တိုက်သောကြောင့်​ ညီတော်မောင်က တဖန် ပြန်တောင်လာပြန်သည်. ကျနော့်လီးအား နွယ်နီ့ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကိုထောက်လိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို ခေါင်းအရင်းမှ အဖျားထိ လက်နှင့် ဆွဲချပြီး သူမရဲ့ ဖင်လုံးတွေကို ဆွဲ ညှစ်ပေးလိုက်သည်. စိတ်က ပြန်ထလာ၍
” ချစ် ဟိုဘက်လှည့်ပြီး ဖင်ကုန်းပေး ကိုထပ်လိုးအုံးမယ်”
ဆိုပြီး နွယ်နီ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချ ကာ လှည့်ပေးလေသည်. ရှမ်ပူတွေနဲ့ အမြုပ်ထနေတဲ့ ကြားက မဲနက်ပြောင်လက်နေတဲ့ ဆံပင်ကြီး ကို တင်ပါးပေါ်တွင် ဖြန့်ချဲလိုက်ပြီး ဖင်လုံးလေးတွေကိုကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲသို့ လီးအား ထိုးထည့်လိုက်သည်. ဒီတခါတော့ အနည်းငယ် အဝင်ချောသွားသည်. နွယ်နီ့လည်း
” အ… အ…ဖြည်းဖြည်း”
ဆိုပြီး ကျနော်လက်အား လှမ်းဆွဲသည်. တဖန်ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ထပ်သွင်းလိုက်ကာ အထုပ်အသွင်း မှန်လာပြီး ကျနော်ရဲ့ လဥနှစ်လုံးက နွယ်နီရဲ့ ဆီးခုံကို တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ ရိုက်နေတော့သည်. စွင့်ကားနေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေ တုန်တတ်နေတာကို ကြည့်ရင်း အသဲယားလာကား တဖောင်းဖောင်းနဲ့ ချနေမိတော့သည်. နွယ်နီ့နဲ့ ကျနော်ရဲ့ လိုးချက်အသံတွေ ရေချိုးခန်းထဲတွင်ပြောင်းဆန်နေတော့သည်. လိုးနေရင်းပင် သူမရဲ့ ဆံပင်ကြီးကို ရေဆေးချရင် အားရပါးရ နမ်းရှုံ့လိုက်သေးတယ်.
ဘဝမှာ တနေ့တည်း ၄ခါ လိုးရသောကြောင့် လူလည်း အတော်ပင်မျော့နေလေပြီ. နွယ်နီ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်က အရမ်းလိုးလို့ကောင်းလွန်းသည်. လူသာ မမျော့သေးရင် ဆက်လိုးချင်မိသည်. ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး ကျနော်လည်း အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲကာ အပန်းဖြေရင် အိပ်ပျော်သွားတော့သည်. အိမ်မက်ထဲမှာပင် နွယ်နီ့ကို ဆက်လိုးနေမိသေးသည်. ဒီလိုနဲ့ dryer သံကြောင့် ကျနော်နိုးလာတော့ နွယ်နီက အင်္ကျီ တွေ ထမိန်တွေ ပြန်ဝတ်ပြီး သူမရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို dryerနဲ့ ရေခြောက်အောင် မှုတ်နေလေသည်. ကျနော်လည်း
“ရတယ် မလိုဘူး ကို့ဟာကို လုပ်မယ်”
ဆိုပြီး ခပ်တင်းတင်းလေး ပြန်ပြောပုံကြည့်ပြီး အသဲယားလာကာ ဖက်နမ်းလိုက်သည်.
” အအေးပတ်ပြီး သေနေရင် ကျမ အမှုပတ်မခံနိုင်ဘူး. ဝတ်စရာရှိတာ ဝတ် ပြီးရင် သွားမယ်”
ဆိုပြီး ကျနော့်အား လှမ်းဟောက်သည်.
အာ့နဲ့ ကျနော်လည်း ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ၅နာရီကျော်လေပြီ. နွယ်နီ့ကို ကားပေါ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျနော်ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းပြီး ကားပေါ်ထွက်လာလိုက်သည်. တလမ်းလုံး ကျနော့်ဘက် စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ ပြောသော်လည်း နွယ်နီက
သာပြန်ပြောသည်. အတော်ပင်စိတ်ထဲ ဘဝင်မကျဖြစ်သွားသည်. စိတ်ဆိုးနေတော့လည်း ဒီလောက်တော့ရှိမှာပါဆိုပြီး ထားထားလိုက်ကာ နွယ်နီ့ရဲ့လမ်း ထိပ်ထိ လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်. ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လမ်းထဲဝင်သွားသည်းအထိ ကျနော့်အား စကားတလုံးမှ ပြောမသွားချေ. သူမရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို နောက်ကျောပေးပြီး ကြွကြွရွရွ ဟန်မပျက်လျှောက်သွားကာ တချက်ပင်နောက်မလှည့်ကြည့်ပေ. လှပလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို နောက်ဆုံး အကြိမ် မြင်တွေ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ကို ကျနော်မသိခဲ့ချေ. ညရောက်သည်အထိ သူမနဲ့ကျနော် စကားမပြောဖြစ်ပေ.
နောက်နေ့ မနက်ကျတော့ ကျတော့ထံ မက်ဆေ့ တစောင်ရောက်လာသည်.
” ၄၅ရက် တရားစခန်းဝင်မှာ မို့ မဆက်သွာ်ပါနဲ့. ပြန်ထွက်လာရင် လာတွေ့မယ်. ဒီနေ့စပြီး ကျမ စိတ်ကြိုက်နေပါရစေ”
ဆိုပြီး ပို့လာသောကြောင့် ကျနော်လည်း ဘာမှ မပြောတော့ချေ. သင်္ကြန်ပြီး ၂ပတ်လောက်ကြာတော့ မက်ဆေ့ထပ်ဝင်လာသည်.
” ကျမ​ပြန်ရောက်ပြီ. ရှင်တွေ့ချင်ရင် ကော်ဖီဆိုင်မှာ တွေ့ကြမယ်”
ကျနော်လည်း ပျော်သွားပြီး ချိန်းလိုက်လေသည်.
နွယ်နီ့ရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီး မမြင်ရတာကြာတော့ အတော်ပင်လွမ်းနေလေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ကျနော် အတွေးတွေ လွန်နေရင်း ကျနော်ရှေ့မှာ လူရိပ်မြင်လိုက်ရ၍ သတိပြန်ဝင်သွားသည်. ဂျင်းဘောင်းဘီ အကျပ်နှင့် အင်္ကျီလည်ဟိုက်ဝတ်ထားကာ ဆံပင်ကဂုတ်ဝဲနဲ့ေ​နကာမျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် ကျနော့်စားပွဲတွင် လာထိုင်လေသည်. ရုတ်တရက်ကျနော်လည်း
ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ ထိုမိန်းခလေးက မျက်မှန်ချွတ်ပြီး ကျနော့်အားပြုံးပြလိုက်သောအခါ ကျနော် သွေးပျက်မတတ် ဖြစ်သွားတော့သည်.
နွယ်နီမှ နွယ်နီအစစ် ကျနော်လုံးဝ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံ
မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလေးဝတ်ပြီး ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့နွယ်နီမှ ခေတ်ဆန်ဆန် ဆံပက်ဂုတ်ဝဲနဲ့ နွယ်နီ…. ကျနော်လုံးဝ ရှော့ရသွားသည်. ကျနော်နှစ်သက်လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီး မရှိတော့ချေ.
” ဘယ်လိုလဲ အကို အံ့ဩနေတာလား. ဘာလဲ ဆံပင်ရှည်တွေမရှိတော့လို့လား. ဟား…ဟားး” လှောင်ရယ်လေသည်. ကျနော်ကြည့်နေရင်း အံကြိတ်ကာ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတော့သည်.
“မင်းဘာလုပ်ပစ်လိုက်တာလဲ ဒီလောက်လှတဲ့ ဆံပင်ကြီးကိုကွာ မင်းမို့လို ညှပ်ရက်တယ်. မင်းကွာ မင်း….. “ဆိုပြီး ကျနော် ဆက်မပြောနိုင်တော့ချေ.
” စိတ်တိုလို့ ညှပ်ပစ်ပြီး မီးရှို့လိုက်တာ. ရှင့်ကိုပြောတယ်လေ. နောက်နေ့က စပြီး ကျမ စိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်လို့. အခုမှ ဆံပင် အတိုလေးနဲ့ လွပ်လပ်ပေါ့ပါးသွားတော့တယ်. လိုက်ပြီး ပစ်မှား မဲ့ လူတွေလည်း မရှိတော့ဘူး. ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ခေါင်းကိုဝှေ့ယမ်းပြီး ဂုတ်ထောက်ဆံပင်တွေ ဝဲနေအောင် ခါယမ်းပြနေသည်. ကျနော်လည်း ဒေါသတွေအလိပ်လိပ် ထွက်လာပြီး
” တောက်….. မင်းမို့လို့ကွာ ငါဒီလောက် ဆံပင်အရှည်ကြိုက်တာ သိရဲ့သားနဲ့ကွာ. မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဒီနေ့ကစပြီး ပြတ်ပြီ” ဟုဆိုကာ ထ ထွက်လာခဲ့တော့သည်. လှပလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်တွေက ကျနော့်အပြစ်တွေကြောင့်ပဲ အခုမရှိတော့ချေ. ကျနော်လည်း ဘဝမှာ နောင်တလို့ ဆုံးမည်မဟုတ်ချေ. နောက်ထပ် ယခုလို ဆံပင်ပိုင်ရှင်မျိုး တွေ့ခဲ့လျှင် သတိထားကာလျှောက်လှမ်းရတော့မည်. မိမိကြောင့် ဆံပင်ရှည်အမျိုးသမီးများ မလျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ကာရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်. ဖတ်ရှုပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်………. 🙏